Zu Zu's Likes - Myanmar Network
Zu Zu's Likes
Back to Zu Zu's Page
Tasty! (အရသာရှိလိုက်တာ!) (ဝေါဟာရသင်ခန်းစာ) [Zawgyi] ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်ုပ်တို့စားတဲ့ အစားအစာတွေအကြောင်းပြောရာတွင် အသုံးပြုသော နာမ၀ိသေသနများစွာကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ တချို့စကားလုံးများသည် ကောင်းသော သဘောကို ဆောင်ပြီး အချို့ကတော့ အပျက် သဘေ… Discussion Tasty! (အရသာရှိလိုက်တာ!) (ဝေါဟာရသင်ခန်းစာ) 42 Likes
IELTS Tips by Nang Yadanar Thant ၂၀၁၄ မတ်လတွင် ကျင်းပသော IELTS စာမေးပွဲတွင် overall band score 8 ရရှိခဲ့သော မနန်းရတနာသန့် နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ဤ podcast တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ယူရန်အတွက် ၂၀၁၄ မတ်လတွင် ကျင်းပသော IELTS စ… Discussion IELTS Tips by Nang Yadanar Thant 16 Likes
အောင်မြင်ချင်ရင် အောင်မြင်မှုကို အရယူပါ (1)The most selfish one-letter word is' I' . Avoid it. အက္ခရာတစ်လုံးတည်းရှိတဲ့ တကိုယ်ကောင်းအဆန်ဆုံးစကားလုံးကတော့ ငါ´ ပါ။ အဲဒါကို ရှောင်ကျဉ်ပါ ... တဲ့။ (2)The most satisfying two-letter word… Discussion အောင်မြင်ချင်ရင် အောင်မြင်မှုကို အရယူပါ 29 Likes ပျင်းရိခြင်းသည် သင့်အလုပ်မှာ ဒုက္ခပေးနေသလား လူရယ်လို့ ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်တွင် အလုပ်ဆိုတာနဲ့ ကြုံဆုံကြမည်မှာ လူသား တိုင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ အရွယ်ရောက်သော လူတစ်ယောက်တွင် အလုပ်ဆိုသည့်အရာနဲ့ ထိတွေ့ရမှာ ကတော့ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်ပါသည်။… Discussion ပျင်းရိခြင်းသည် သင့်အလုပ်မှာ ဒုက္ခပေးနေသလား 40 Likes
Hla Phone Myint Member Hla Phone Myint 1 Like Finance Coordinator
The post is to be based in Yangon and opened…
Blog Finance Coordinator2Likes Unilever Myanmar - Various Vacancies
1. Channel Marketing Manager…
Blog Unilever Myanmar - Various Vacancies5Likes
Oxfam isaleading International NGO withaworldwide…
Blog Various Positions in Oxfam 1 Like Liaison Officer
Blog Liaison Officer 1 Like အဓိပ္ပါယ်မှတ်ရခက်သော စကားလုံး ၁၀ လုံး တစ်ခါတစ်လေ သင် မြင်ဖူး၊ ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူး ရုံမက သုံးဖူးသော စကားလုံး တစ်ချို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဇဝေဇဝါဖြစ်တတ်တာ ကြုံဖူးမှာပါ။ အဘိဓာန်မှာ အနက် အဓိပ္ပါယ်ရှာကြည့်ပြီးတောင်မှ ခဏလေးနဲ့ ခေါင်းထဲကနေ… Discussion အဓိပ္ပါယ်မှတ်ရခက်သော စကားလုံး ၁၀ လုံး 14 Likes
ဆင်တူရိုးမှားသတိထားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁၃) colonel နှင့် kernel ၄င်းစကားလုံးနှစ်လုံးသည် အသံထွက်တူသဖြင့် အပြောတွင်မှားနိုင်ပါသည်။ Colonel သည် “အထက်တန်းစစ်ဘက်ရာထူး ဗိုလ်မှူးကြီး” အဓိပ္ပါယ်ရသည့် noun ဖြစ်သည်။ Colonel is the military rank b… Discussion ဆင်တူရိုးမှားသတိထားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁၃) 10 Likes
Intensive Reading အကြောင်းသိကောင်းစရာ Types of Reading အမျိုးမျိုးရှိသည့် အနက် ဤသင်ခန်းစာတွင် "Intensive Reading" ကို လေ့လာကြရအောင်။ Clare West ၏ Reading Techniques စာအုပ်၏ စာမျက်နှာ ၂၄ တွင် "Intensive reading involvesavery careful t… Discussion Intensive Reading အကြောင်းသိကောင်းစရာ 38 Likes
သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ြ… ယနေ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် အစီအစဉ်မှာ Lana Winter-Hebert ရေးသားထားသည့် 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day ကိုမှီးညမ်းရေးသားထားတဲ့ စာဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ခုအကြောင်းကို… Discussion သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ြ… 23 Likes ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ဂရီယာဆန် ဆုရ မှတ်တမ်း ရု… ဗြိတိသျှကောင်စီ မြန်မာတွင် မြန်မာပရိသတ်များအတွက် ယူကေနိုင်ငံမှ ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များကို လစဉ် (၂၀၁၄ မေလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ) ပြသပါမည် ဖြစ်ပါသည်။ မေလ အတွက် ပြသမည့် ရုပ်ရှင်မှာ ဒါရိုက်တာ Peter Travis မှ… Discussion ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ဂရီယာဆန် ဆုရ မှတ်တမ်း ရု… 8 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Beat… It beats me (ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ) You say it beats me when you cannot understand something. (It beats me (ငါတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကွာ) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို နားမလည် တဲ့အခါမှာ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Beat… 105 Likes သုံးနူံးမှတ်သားအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများ(၂၇) ၄။ someone or something that makes you angry မိမိအား စိတ်ဆိုးစေသည့်အရာ၊ လူ annoying [adj] an annoying person, fact, or situation သည် မိမိအား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ စိတ်တိုစေသည်။ Henry's the m… Discussion သုံးနူံးမှတ်သားအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများ(၂၇) 19 Likes